Japoney : havaozina ny CEG Antanimalandy sy Ambohimandroso | NewsMada
Japoney : havaozina ny CEG Antanimalandy sy Ambohimandroso
Hamatsy vola ny fanavaozana ny CEG Antanimalandy sy Ambohimandroso ny masoivohon’i Japon eto amintsika. Mitentina 120 000 euros ny sorabola hatokana amin’ny tetikasa roa, araka ny fanazavan’ny masoivoho japoney, i Ichiro Ogasawara, omaly teny Ivandry. Havaozina ny efitrano fianarana efatra ho an’ny CEG Antanimalandy. Tokana ny CEG ao anatin’ny kaominina Antanimalandy ka tsy ampy intsony handraisana ny mpianatra rehetra. Anisan’ny mandray ny mpilatsaka an-tsitrapo japoney io CEG io amin’izao fotoana izao. Avy amin’ny fahitan’ireo tanora ireo ny zava-misy tany an-toerana no nanosika ny masoivoho japoney hanohana ny fanitarana ny sekoly, hoy ny fanazavana.
Zava-dehibe amin’ny Japoney ny maha olona, antony hanampian’izy ireo ny fanabeazana eto amintsika. Natao omaly ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny masoivoho japoney sy ny mpitantana ny CEG roa.
Ao anatin’ny tetikasa fanohanan’ny Jica ny fanabeazana ihany, hisantatra ny tetikasa hafefatra amin’ny fanorenana EPP ho an’ny faritra Atsinanana ny tomponandraikitra. Mahatratra 110 ny efitrano hatsangana ho an’ny faritra. 13 800 ny mpianatra hisitraka ny fotodrafitrasa vaovao hapetraka. Hanomboka amin’ny volana marsa izao ny asa ary hifarana ny volana febroary 2019. Mahatratra 88 ny efitrano hajoro amin’ny EPP 21 miaraka amin’ny biraon’ny talen-tsekoly sy ny toerana hitehirizana rano.